घर फर्किने बढेसँगै गाउँ जोखिममा – Health Post Nepal
२०७७ असोज १७ गते १५:४५
निषेधाज्ञा खुलेसँगै काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिरिनेको संख्या बढ्दो छ। चाडपर्व पनि नजिकै आएकाले लामो समयदेखि काठमाडौंमा रोकिएका नागरिकहरुको घर जान भीड नै लागेको छ।
उपत्यकाबाट बाहिरिनेको संख्या बढेसँगै गाउँमा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दो छ। गाउँ फर्किनेका लागि न स्थानीय सरकारले नै स्वास्थ्य सुरक्षाको तयारी गरेका छन्, न प्रदेश सरकारले नै। शहरी क्षेत्रबाट गाउँ फर्किनको संख्या उच्च छ।
यससँगै अब गाउँमा चहलपहल बढ्ने भएको छ। गाउँमा संक्रमणको जोखिमबारे कुनै पनि सरकारले चिन्ता लिएको देखिँदैन। अहिले धेरै संक्रमित बजार क्षेत्रका मानिसमा हुने गरेको र ती मानिस दशैं, तिहार, छठलगायत चाडपर्वमा घर जाने भएकाले गाउँघरतिर संक्रमण फैलिने खतरा रहेको छ।
बन्दाबन्दी खुलेसँगै अहिले बजारमा मानिसको चहलपहल बढेपछि संक्रमित संख्या पनि ह्वात्तै बढेको छ। अब तीनै मानिस गाउँघरमा जाँदा संक्रमण फैलिने डर रहेको छ।
चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा मानिस अब गाउँघरतिर जान थालेका छन्। विद्यालय, कलेज बन्द भएका बेला कतिपय विद्यार्थी घर गइसकेका छन् भने अब केही जाने तयारीमा छन्।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोभिड–१९ मानिसको नजिकको सम्पर्कबाट सर्ने हुँदा भीडभाड नगरी चाडपर्व मनाउन आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयले सकभर दशैँमा घर नजान, जानै परे घर गइसकेपछि कम्तीमा १४ दिन होम क्वारेन्टिनमा बस्नसमेत अनुरोध गरेको छ।
कोभिड–१९ का फोकल पर्सन महेन्द्र श्रेष्ठले चाडपर्वसँगै जोखिम गाउँतिर बढ्ने बताए। उनले उपत्यकालगायत ठाउँबाट मानिस चाडपर्व मनाउन गाउँघरतिर गए त्यहाँ रहेका वृद्धावृद्धा, साना बालबालिका, दीर्घरोगी, सुत्केरीलगायतमा जोखिम बढ्ने बताए।
यही कात्तिक १ गतेदेखि नेपालीको महान चाड दशैँ शुरु हँुदैछ। त्यसलगत्तै तिहार र छठपर्व शुरु हुँदैछ। नेपालमा अहिले संक्रमण एक व्यक्तिबाट अर्को स्थानीय व्यक्तिमा संक्रमण सरेपछि संक्रमणको दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको छ।
तैपनि अहिले केही जिल्लामा वर्ग विशेष (क्लस्टर)मा संक्रमण फैलिसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। ‘यसपटक चाडपर्व हामी जहाँ छाँै, त्यही बसेर मनाए हुन्छ । हामी चाडपर्वमा घर गयौँ भने घरमा रहेका बुढा आमाबुबा, साना बालबालिका र दीर्घरोगीलाई संक्रमणको जोखिम हुन्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘बरु यसपटक टीका नलगाए केही हुँदैन, खोप आएपछि अर्को वर्ष टीका लगाउँदा हुन्छ।’
हिजो शुक्रबार एकैपटक दुई हजार ७२२ जनामा संक्रमण देखिएको थियो। त्यसमध्ये आधाभन्दा धेरै एक हजार ६३८ काठमाडौं उपत्यकाका संक्रमित रहेका छन्। हिजोको तथ्यांकले पनि अहिले सबैभन्दा बढी संक्रमित शहरी क्षेत्रमा रहेको देखाएको छ।
अहिलेसम्म काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै २६ हजार ७४१ जना संक्रमित भइसकेका छन्। नेपालमा अहिले ८२ हजार ४५० संक्रमितमध्ये २१ हजार २३४ सक्रिय संक्रमित छन्।
यस्तै ६० हजार ६९६ जना निको र ५२० जनाको संक्रमणको कारणले निधन भएका छन्। नेपालमा निको हुने दर ७३.६ प्रतिशत रहेको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले दशैँ अर्को वर्ष पनि आउने भएकाले भीडभाड नगरी मनाउन अनुरोध गरेका छन्।
उनले दशैँका बेला उच्च संक्रमण भएको जोखिम ठाउँबाट गाउँ जाने भएकाले गाउँतिर संक्रमण सर्ने बताए ।
‘दशैँको बेला कोभिड–१९ को उच्च संक्रमणको ठाउँबाट टीका थाप्न गाउँगाउँ जाँदैछाैं । एकपटक सोचौँ कतै हामीले कोरोना त बोकेर गएका छैनौं,’ उनले भने, ‘ज्येष्ठ नागरिकसँग रोगसँग लड्ने क्षमता कम हुन्छ। उनीहरुलाई संक्रमण भएको बेला अस्पतालमा राखेर विशेष उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले चाडपर्वको बेला घर जाँदा विशेष ख्याल गर्नुपर्दछ।’
इपिडिमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. वासुदेव पाण्डेले दशैँमा घर जाँदा शहरबजारबाट संक्रमण लिएर जाने भएकाले गाउँ जोखिम हुने बताए। उनले दशैँमा आफूभन्दा मान्यजनसँग टीका थप्दा टाढैबाटै बसेर थाप्नसमेत अनुरोध गरे।
उनले बसमा घर जाँदा स्वास्थ्यका न्यूनतम मापदण्डसमेत अपनाउनुपर्ने बताए। महागरीय ट्राफिक महाशाखाका प्रवक्ता तथा प्रहरी उपरीक्षक रामेश्वरप्रसाद यादवले धेरै मानिस पहिल्यै गइसकेकाले यसपटक कम मानिस चाडपर्वमा जाने बताए।
उनले अहिले दैनिक २१ हजार मानिस घर गइरहेको जानकारी दिए। उनले चाडपर्व नजिकिएसँगै घर जाने मानिसको पनि भीड लाग्न थालेको बताए। उनका अनुसार यही असोज १ गतेदेखि अहिलेसम्म तीन लाख १५ हजार मानिस घर गइसकेका छन्। रासस
गाउँ फर्किन थाले उपत्यकामा राेकिएकाहरु